Sampana fanafoanana an'i Ryanair: Mivondrona ireo mpanamory fiaramanidina Ryanair
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Sampana fanafoanana an'i Ryanair: Mivondrona ireo mpanamory fiaramanidina Ryanair
Septambra 25, 2017
Ny latabatra fanafoanana an'i Ryanair dia nampiharihary ny tsy fahampiana ara-drafitra eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha sy ny asany ary ny fisarahana lalina eo amin'ny fitantanana Ryanair sy ireo mpanamory azy. Hitan'ny besinimaro fa vonona hanohana ny orinasany ny mpanamory fiaramanidina Ryanair, nefa koa ny firaisan'ny mpanamory fiaramanidina amin'ny antso ataon'izy ireo ho an'ny fanovana lalina amin'ny fomba fampiasan'i Ryanair sy ny fomba itondrany azy ireo - tsy kely indrindra mifanaraka amin'ny didim-pitsarana navoakan'ny fitsarana eropeana farany teo. Justice. Ny mpanamory Eoropeana dia maneho ny fanohanany ny fitakian'ny mpiara-miasa aminy ary miaro azy ireo amin'ny fo manontolo amin'ny fandaminana samirery ho toy ny vatan'ny mpanamory fiaramanidina iraisana. Miantso ireo mpampiasa vola andrana ihany koa ny ECA mba hanomboka ny fanovana ny rafitra ary hiasa amin'ny fifanakalozan-kevitra ara-tsosialy ilaina maika.
“Araka ny efa niparitaka be tamin'ny haino aman-jery, ny mpanamory fiaramanidina Ryanair avy amin'ny toby maro eropeana dia nandefa taratasy niaraka tamin'ny mpitantana azy ireo. Mazava ireo taratasy ireo. Ny mpanamory fiaramanidina Ryanair dia mandray andraikitra hentitra sy miray: te hanana fepetra asa mendrika sy fifanarahana asa mivantana izy ireo ”, hoy ny filoha lefitra ECA, Jon Horne. “Nanolotra tanana fanampiana ny orinasan'izy ireo izy ireo, mba handaminana izany korontana nampijaly tena izany izay nahatonga ny mpandeha an'arivony ho tratra. Ho setrin'izany, ny mpanamory fiaramanidina Ryanair dia mbola tsy nangataka bonus crude. Mila zavatra tsotra kokoa izy ireo - fifanarahana asa mivantana sy maharitra: fehezin'ny lalàn'ny firenena onenan'izy ireo sy iasan'izy ireo; amin'ny toe-javatra mitovy amin'ny mpanamory fiaramanidina Eraopeana hafa; ary fifanakalozan-kevitra ara-tsosialy tena misy heviny ”.
Ryanair dia mampiasa rafitra ny mpanelanelana sy ny mpanamory fiaramanidina miasa manokana manome serivisy amin'ny alàlan'ny masoivoho vonjimaika, ary matetika iharan'ny ora aotra (tsy misy sidina = tsy misy karama). Ny fandaminana asa toy izany dia misy fiatraikany ratsy amin'ny fepetra iasana satria mety hisy vokany amin'ny famerana ny fahazoana tombony lehibe toy ny fialan-tsasatra karama, aretina na fialan-tsasatry ny fiterahana. Izany dia manome fahafaha-manao sy toha-bidy ambany kokoa, nefa koa hery-miasa mpanamory fiaramanidina tena tsy marin-toerana - araka ny nasehon'ireo mpanamory fiaramanidina fotoana fohy hijanona ao Ryanair.
Ity maodely fampiasan-tena tsy mampino ity dia iharan'ny tsindry avy amin'ny famotopotorana momba ny hosoka amin'ny hetra mety hitranga sy / na fiarovana ara-tsosialy, toa ny any Alemana, sy ny fitsarana nataon'ny Fitsarana Eoropeana farany teo. Nanapakevitra ity fanapahan-kevitry ny CJEU ity fa afaka mangataka ny zon'izy ireo hiasa any amin'ny Courts hafa ankoatr'i Irlandy ny ekipan'i Ryanair, ka manohitra ny kabary nataon'i Ryanair momba ny “fiaramanidina Irlandy = mpiasa Irlandey”. Raha ny tokony ho izy dia nilaza ny Fitsarana fa ny 'tokan-trano' an'ny ekipazy no 'famantarana lehibe indrindra' hamaritana ny toerana fiasan'ny mpiasa sy ny lalàna mifehy ny asa sy ny fahefana mifandraika amin'izy ireo. Izy io dia hanomezana fahefana ny aircrew hanenjika ny zon'izy ireo any amin'ny fitsarana eo an-toerana ary hamela azy ireo hanohitra ny fananganana mpiasa tsy mitovy finoana amin'ny lalàna ao amin'ny fireneny.
"Ity fitsarana ao amin'ny Fitsarana Eoropeana ity dia tsy azo tsinontsinoavin'ny fitantanana Ryanair, na ireo mpampiasa vola andrim-panjakana", hoy i Philip von Schöppenthau, sekretera jeneralin'ny ECA. “Satria sahirana ny mpitantana an'i Ryanair mahita vahaolana haingana, miantso ny mpampiasa vola izahay mba hieritreritra fotoana fohy momba ny faharetan'ny orinasa sy ny iray amin'ireo fananany sarobidy indrindra: ny mpiasa. Hitanay androany fa ny fiaramanidina - mbola - mila ekipa hanidina azy ireo ary hitondra ny mpandeha aminy soa aman-tsara any amin'ny toerana alehany ”.